“ तोकिएकै स्थानमा बन्नु पर्छ निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ” – Mission Khoj
प्रदेश नम्बर २ बाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा नेपाल जेसीजका पुर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज महानगरपालीका कार्यालयका पुर्व वरिष्ठ अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी विकाश बोर्डका नवनियुक्त सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पर्साका नेता शम्भु प्र.गुप्ता संग यस अनलाईनका कार्यकारी सम्पादक श्याम कुशवाहाले गर्नु भएको अन्तर्वाताको सार संक्षिप्त विवरण—
प्रदेश सरकारका उद्योग प्रयटन बन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायज्यूले कुनैपनि हालतमा प्रदेश अन्तर्गतको वन कटान गरि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न दिन्नौ यस बारेमा तपाईको के धारणा छ ?
वन मन्त्रीजी को यो विचार वहाको व्यक्तीगत स्वार्थ बाट प्रेरित विचार हो । प्रदेश २ को सरकारको अधिकारीक निर्णय आएको छैन तर मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीज्यूहरुको फरक विचार आएको कुरा मिडीयामा सुन्न पाएका छौ । बन मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा बुझनु पर्छकी निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रदेशबासीको चाहना र देशको आवश्यक्ता हो । यो काठमाण्डौ निजगढ दु्रत मार्ग संग जोडीएको छ , देशको एक मात्र सुख्खा बन्दरगाह र नेपालको प्रवेशद्धार विरगञ्ज संग नजिक छ । नेपाल सरकारले २०७१ सालमा चार किल्ला तोकी सो जग्गामा काडे तारबार , आवश्यक डिजाइन , पहुच मार्ग तयार गर्ने कार्य तथा जग्गा मुआब्जा दिने कार्य समेत सम्पन्न गरि सकेको छ । सो कार्यको लागी नेपाल सरकारले लगभग तिन अर्ब रुपैया खर्च गरिसकेको छ । यस अन्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गरेको छ । तसर्थ विचार नपुर्याई अध्ययन नगरि हचुवाको भरमा निर्माणलाई निरुतसाहीत गर्ने , अवरोध गर्ने , राष्ट्रको विकाश देख्न नसक्ने शक्तीहरुको उक्साहटमा बोल्ने कार्य तुरन्त बन्द गरी शिलान्यास कार्यको तयारीमा जुटनु पर्ने सुझाव बन मन्त्रीज्यूलाई दिन चाहन्छु ।
वन विनाश गरी विकाश कार्य गर्न मिल्छ नेताजी ?
विकाशको लागी लगभग ४४ प्रतिश्त वनले ढाकीएको नेपाललाई कमसेकम वन छती हुने गरी निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यलाई दु्रत गतीमा अगाडी बढाउनु पर्छ । (EIA) वातावरण प्रभाव मुलायंकन रिपोर्ट अनुसार बढीमा एकलाख मात्र काम लाग्ने रुख काटनु पर्छ बाकी अन्य स—साना झाडी , बुटयान , वनमारा बोट विरुवा समेत गरी अढाई लाख काटनु पर्ने उल्लेख छ । तर दश बीस लाख रुख काटने भ्रम फैलाउने काम केही व्यक्तीबाट भइरहेको कुरा षडयन्त्रकारीहरुको चाल हो । जस लाई हामीले समयमै लगाम लगाउनु पर्छ । काटिएको रुखको बदलामा दुधौरा नदि,पसाहा नदि,बालगंगा नदिको किनारा तथा खाली रहेको जग्गामा १० लाख रुख विक्र्षारोपन गरी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई गुरु योजना ल्याउन आग्रह गर्न चाहन्छु । साथै वर्तमान सरकारका संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्री योगेश भटराईज्यूले प्रदेश वन मन्त्रीले भनेर निर्माण कार्य रोकीदैन अगामी छव महिना भित्र यस्को शिलान्यास कार्य गरिने उदघोष गर्नु भएको कुरा लाई व्यवहारमा दृढताका साथ लागु गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विरोधमा आउने अभिव्यक्तीको पछाडी के कारण छ भन्न सक्नु हुन्छ ?
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कार्य निर्माणको विरोध गर्नेहरु देश विकाश विरोधी हुन । यस सम्बन्धमा अध्ययन नगरि व्यक्तीगत स्र्वाथ बाट प्रेरित भई , संकुचित सोचको कारण पुर्वका केही नेताहरु र तिनका वीरगञ्जमा बसेका केही आफन्तहरु सस्तो लोक प्रियताको लागी कुतर्क गरेर विमानस्थल पुर्व तिर सार्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन जुन सम्भव छैन , देखावटी मात्र हो । उनीहरुलाई पनि थाहा छ कि यो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्यत्र सार्न सकिदैन तर पनि जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन । तसर्थ यो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्तावीत स्थान र निर्धारीत समयमा बन्नु पर्नेमा हामी सबै यस्ता राष्ट्रिय , अन्तराष्ट्रिय विरोधीहरुको विरोधमा एकजुट भएर लाग्नु पर्छ ।
प्रस्तावीत स्थान निजगढमै अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल बनाउनु पर्ने के कारण छ ?
निजगढ अन्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको आठ सम्भावीत स्थानको प्रारमभीक अध्यन पछि छनौट गरिएको उपयुक्त र उचीत स्थान हो । अन्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सिंगल , डब्बल , ट्रिपल रनवे निर्माणको लागी सबै भन्दा उपयुक्त स्थान हो । काठमाण्डौ पोखरा र लुम्बीनीको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा बढी क्षमताको विमान , कार्गो अवतरण तथा उडान गर्न सक्ने कडा भुबनौट तथा भोगौलीक अवस्था यहाँ विद्धमान छ । मित्र राष्ट्र भारत र चिन जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देश लगाएत अमेरिका , अष्ट्रेलिया , युरोप लगाएतका देशहरुको पर्यटकलाई आकर्षित गरी एशीयाकै सुरक्षीत हवाई हबको रुपमा विकाश गर्न सकिन्छ । तसर्थ निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को विकल्प खोज्नु सरासर अध्ययन बिनाको अन्धकारमा उर्फीनु जस्तो हो ।
अन्त्यमा जनतालाई के भन्न चाहनु हुन्छ नेताजी ?
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्तावीत स्थानमा निर्धारीत समयमै बन्नु पर्छ । यस्को लागी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार सानोतिनो , झिनामसिना , बादविवाद र कुतर्कमा अलझिनु हुदैन । पुर्ण उत्साह र दृढताका साथ एकजुट भएर निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडी बढाउनु पर्छ । जसबाट यस क्षेत्रको जनताले रोजगारी पाओस , विश्वका पर्यटकहरुको आगमनमा गुणात्मक बृद्धी होस । यसले प्रदेश नम्बर २ को जनताको आर्थीक र समाजीक स्तर गुणात्मक रुपमा बृद्धी गरोस र नेपाल सरकारको सम्बृद्ध नेपाल र शुखी नेपालीको नारा सकार गर्न मद्धत पुगोस भन्ने मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु ।